Ny asa isanandro feno herimpo ataon’ireo siantifika mpiasana laboratoara hiadiana amin’ny Ebôlà ao Liberià · Global Voices teny Malagasy
Vitsy ireo tatitra momba ny asa isanandron'ireo teknisiana mpiasan'ny laboratoara
Voadika ny 26 Jolay 2020 16:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, македонски, Ελληνικά, Français, English
Nandritra ny krizy ateraky ny Ebôlà misy amin'izao fotoana izao (EVD), marobe ireo tatitra mitantara momba ireo marary, mpiasan'ny fahasalamàna, vaksiny sy vokatra aterak'ilay aretina any amin'ireo firenena tratrany. Saingy vitsy ireo tatitra momba ny asa isanandron'ireo teknisiana mpiasan'ny laboratoara sy ny an'ireo izay mikarakara ny zavatra ilain'izy ireny isanandro. Tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny buzzfeed.com mitondra ny lohateny hoe Ireo Maherifo Tsy Taza-maso amin'ny Krizin'ny Ebôlà ao Liberià, i Jina Moore no milaza ny tantaran'ireo olona manandanja amin'ny ady amin'ny viriosin'ny Ebôlà ao Liberià :
Tato ho ato i Catherine Jeejuah dia vao maraina be no manomboka ny asany izay tsy fantany intsony na ho ora firy na ho firy. Tsy misy dikany. Mifoha mbola maizina izy, mandrehitra afo, ary mahandro vary sy anana ho an'ireo zanany roa. Tokony ho amin'ny 6 ora sy 30 mn eo ho eo, rehefa manomboka tafiditra ny varavarankely ny hazavana, lasa izy mamonjy ilay sekoly akaiky indrindra eo.
Eto, mamerina ny nataony indray izy, amin'ny sehatra somary midadasika kokoa. Jeejuah, 30 taona, miampy vehivavy roa hafa, samy mpirotsaka an-tsitrapo daholo, no mahandro ho an'olona 12 amin'ireo olona manandanja indrindra ao Liberià ankehitriny saingy tsy misy mpahita.
Atao ho an'ireo teknisiàna manao fitiliana ny ràn'ireo marary ahiahiana ho mitondra otrikaretina Ebôlà ireo sakafo 12 ireo. Mitsidika ny tokantranon'ireo olona marary sy ireo ivontoerana natao hikarakarana ny Ebôlà izy ireo, manatsatoka fanjaitra amin'ny lalàndràn'ireo marary izay saro-pantarina ivelany, faran'izay tena mpamindra aretina. Avy eo ry zareo mitondra ny ràn'izy ireny miverina any amin'ilay hany laboratoara momba ny fahasalamàna ao Liberià, ora iray mahery miala an'i Monrovia renivohitra.